အဆီပြန်မျက်နှာအသားအရေ - ကုသမှု
အဆီပြန်အသားအရေကုသမှု - ဇွဲနှင့်သည်းခံခြင်းလိုအပ်ပါတယ်တဲ့လောကီဖြစ်စဉ်ကို။ ပိုများသောမကြာသေးမီက, အသက်နှင့်တကွ, ပြဿနာပျောက်သွားမှာ, သင်သာအပျိုဖော်ဝင်များ၏ကာလထဲကအစောင့်ဆိုင်းဖို့လိုအပျသောအမြင်ရှိ၏။ သို့သော်ဤအခိုင်အမာအမှန်တရားကနေဝေးခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း 40 တစ်ခါတစ်ရံတွင်အဆီပြန်အသားအရေခက်ခဲပြီးသား, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ပွဿနာမြားစှာဖန်တီးပေမယ့်အများကြီးပါသေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်, 25 နဲ့ 30 ပါ။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ကအဆီပြန်အသားအရေကုသမှုများအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်ကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုအပ်သည့်အဖြစ်ပါစေနိုင်ရန်အတွက်မကြာမီပြဿနာအကြောင်းကိုမေ့လျော့ခြင်းနှင့်လှပသောအသားအရေကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအဆီပြန်မျက်နှာအသားအရေကိုကုသမှုအတွက်လူအပေါင်းတို့၏ပြဿနာများနှင့်၎င်းတို့၏အကျိုးဆက်များ၏အကြောင်းတရားများ addressing ကိုရည်ရွယ်, ပြည့်စုံရပါမည်။
အသားအရေ၏ပထမဦးဆုံးအမျိုးအစား, ကံမကောင်းသည်ဗီဇဖြစ်ပွားပါသည်။ အဘယ်သူမျှမရန်ပုံငွေများပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာအဆီပြန်အသားအရေပိုဆိုးလာကြောင်းအချက်များဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်လည်းပင်ပုံမှန်သို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေအမျိုးအစားနှင့်တကွ, ဆိကြည်ဂလင်း၏ function ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါမျက်နှာအသားအရေဆီပြန်ဖြစ်လာသည်ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းရင်းပြည်တွင်းရေးရောဂါများဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်သင်သည်ချက်ချင်းထွက်ရှာတွေ့သင့်တယ်။
အောက်ပါကြောင့်ဆိကြည်ဂလင်းအများစုမှာမကြာခဏပုံမှန်မဟုတ်သော function ကို:
အဆိုပါဆိကြည်ဂလင်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်သက်ရောက်မှုထားတဲ့ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ testosterone ဟော်မုန်းတွေတိုးလာပမာဏ,
ထိုဆိကြည်ဂလင်း၏ function ကိုအဖြစ်ဟော်မုန်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများထိခိုက်လက်ခံရရှိဆေးဝါးများ;
ချို့ယွင်းအသည်း function ကို;
အလွန်အကျွံ sebum ဘက်တီးရီးယားကြီးထွားများအတွက်အဆင်သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးသောပိတ်ဆို့ခြင်း, ချွေးပေါက်စေပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, ရောင်ရမ်းခြင်းအတွက်ကုသမှုမလိုအပ်ကြောင်းအနက်ရောင်နှင့် whiteheads နှင့်အခြားပြဿနာများ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ရလဒ်များ။ ဟုတ်ပါတယ်, တစ်ဦး cosmetologist ၏အကူအညီဖြင့်အများကြီးပိုပြီးလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်အသားအရေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီတတ်နိုင်သမျှမပါလျှင်ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုအဆီပြန်အသားအရေများအတွက်ရိုးရာကုစားချမှတ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
ကြက်ဥအဖြူကနေဖက်တီးစိမ်အရေပြားကိုမျက်နှာဖုံးကုသမှုအတွက်အထိရောက်ဆုံးစဉ်းစားအဖြူနှင့်အပြာရွှံ့မျက်နှာ, calendula ၏ tincture, အသီး-ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျက်နှာဖုံးများ။ မျက်နှာအဆီပြန်အသားအရေ, Peppermint, chamomile, horsetail, Rosemary, စိန့်ဂျွန်ရဲ့ wort, cornflower, yarrow ၏ကုသမှုများအတွက်ထိရောက်သောပျိုးပင်အဖြစ်။
သပ်ရပ်ဟော်မုန်းနိုင်ရန်အတွက်အနီရောင်ဖြီး, တောင်ပေါ်သားအိမ်ကဲ့သို့သောသဘာဝကကုစားဖို့တာဝန်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဤဟင်းသီးဟင်းရွက်များအသုံးပြုခြင်းတင်းကြပ်စွာအသုံးပြုမှုများအတွက်အကြံပြုချက်များနှင့်အညီ, contraindications ၏မရှိခြင်းအတွက်သာဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ကြသည်။ မူလစာမျက်နှာကုသမှုအများအပြားအဆင့်ဆင့်ပါဝင်ပါသည်။
ရောင်ရမ်းခြင်း၏ 1. ဖယ်ရှားရေး
inflammatory ဖြစ်စဉ်များဘက်တီးရီးယားပျံ့နှံ့နိုင်သမျှအများဆုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတစ် contraindication ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျပထမဦးဆုံးရောင်ရမ်းဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဤအရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်စေဘို့ပိုးသတ်ဆေးသို့မဟုတ် salicylic acid အပေါ်အခြေခံပြီးလက်ဖက်ရည်သစ်ပင်ရေနံ, calendula tincture သို့မဟုတ်ယူကလစ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများရောင်ရမ်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကုသဥပမာ salitsilovo- ဇင့်ဆီမွှေးအဘို့နှင့်အတူချုံ့။
facial သန့်စင်ဆီပြန်အသားအရေအထူးအာရုံစိုက်လိုအပ်သည်။ နံနက်နှင့်ညနေပိုင်း, အရေပြားတစ်ဦးဂျယ်သို့မဟုတ်လိုးရှင်းတွေနဲ့သန့်စင်သင့်ပါတယ်။ ချောကျိကျိအသားအရေအမျိုးအစားများများအတွက်ရေပူနှင့်ဆပ်ပြာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆိကြည်ဂလင်းကိုလှုံ့ဆော် contraindicated နေကြသည်။ နှစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်ကသင်သည်လည်းပွတ်တိုက်သို့မဟုတ်အထူးမျက်နှာဖုံးများနှင့်အတူမျက်နှာပို In-depth ကိုသန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ညင်ညင်သာသာဆေးကြောမတိုင်မီ 10 မိနစ်ဝက်ခြံကာကွယ်အရေပြား kefir သို့မဟုတ်သွေးရည်ကြည်ဆေးကြောသန့်စင်။
ကလေးအမှုန့်အရောအနှောများနှင့် calendula ၏ tincture 15 မိနစ်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ဤသည်မျက်နှာဖုံးသန့်စင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်;
ပျားရည်နှင့်လတ်ဆတ်သောသံပုရာဖျော်ရည်ကိုတစ်ဦးလက်ဖက်ရည်ဇွန်းရောထွေး, နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရ oat အလွှာများနှင့်နှင်တံပရိုတိန်းတစ်ဇွန်းထည့်ပါ။ ရရှိလာတဲ့အရောအနှောမျက်နှာကိုမှလျှောက်ထားခြင်း, 15 မိနစ်အခန်းထဲမှာလက်ဆေးရေပြီးနောက်ခဲ့သည်;
ယင်းအပေါက်ကျဉ်းမြောင်းများအတွက်ထိရောက်စွာကြာပွတ်ကြက်ဥအဖြူအရောအနှောများနှင့်ဇွန်းခြောက်ကပ်သောဝိုင်ဖြူ၏အရေပြားမှလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ 10 မိနစ်ပြီးနောက်, မျက်နှာဖုံးရေအေးနှင့်အတူချွတ်ဆေးကြောသည်။
အဆီပြန်အသားအရေညံ့ဖျင်းအောက်စီဂျင်နှင့်အခြားအာဟာရဓာတ်တွေနဲ့ထောက်ပံ့နေသည်, ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုရှင်းလင်းပြီးနောက်လုပ်သူများကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်လည်းဟင်းရည် chamomile သို့မဟုတ် Peppermint ကနေဖန်ဆင်းတော်အလှကုန်ရေခဲ, ကိုသုံးနိုင်သည်။
အာဟာရနှင့်အစိုဓာတ်မျက်နှာဖုံးများအရောင်, အသုံးဝင်သောတ္ထုများနှင့်အတူအသားအရေ၏ရွှဲနှင့်အပိုဆောင်းသန့်စင်တိုးတက်စေခြင်း, ဆိကြည်ဂလင်း၏ပုံမှန်များအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ဤအရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အောက်ပါအဆီပြန်အသားအရေများအတွက်ထိရောက်သောရိုးရာကုစားနေသောခေါင်းစဉ်:
လတ်ဆတ်သောသံပုရာဖျော်ရည်၏5ပေါက်, ပရုတ်၏ 10 ပေါက်နှင့်ကြာပွတ်ပရိုတိန်းရောမွှေပါ။ 15 မိနစ်မှ Apply နှင့်သုတ်ခြင်း,
chamomile ပန်းပွင့် elderberry နှင့်ထုံးအရောင်များထဲမှလက်ဖက်ရည်ဇွန်းရောမွှေပါ။ အရောအနှောတစ်ဦးဆူရေရေချိုးအပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုဖို့ 10 မိနစ်အဘို့, ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေ 250 ml ကိုသွန်းလောင်းခဲ့သည်။ 0.5 နာရီ, filter ကိုနှင့်ယူနီဖောင်း slurry ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်ပျားရည်တစ် oat မုန့်ညက်တစ်ဦးလက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှင့်အတူရောထွေးပြီးနောက်။ အရောအနှောနွေးပြီးတော့ရေအေးနှင့်အတူချွတ်ဆေးကြော, 20 မိနစ်အကြာတွင်တစ်ဦးအထူအလွှာရန်လျှောက်ထားခဲ့သည်;
အဆီပြန်အသားအရေ moistening များအတွက်သံပုရာရေနံရွှံ့သို့မဟုတ်ကြက်ဥအဖြူသို့မဟုတ်ပန်းရောင်အနည်းငယ်ကျဆင်းလာ mask ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
မျက်နှာအဆီပြန်အသားအရေအမျိုးအစားသိကောင်းစရာများ cosmetologists ပိုင်ရှင်တွေ
အရေပြားပေါ်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာတစ်ဦးရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကိုလည်းမရှိလျှင်အကြောင်းရင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအများအပြားအသားအရေပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးများအတွက် contraindicated ထားတဲ့အတွက်အရေပြားအောက်ဆုံး mite, ဖြစ်နိုင်ပါသည်အဖြစ်, အရေပြားအထူးကုနှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်,
အဘယ်သူမျှမအမှု၌၎င်း၏အဆီ content တွေကိုလျှော့ချဖို့မျှော်လင့်, အရေပြား desiccate လို့မရပါဘူး။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုအတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ပို. ပို. မကြာခဏအသားအရေ degreasing နှင့် podsushivayuschee နည်းလမ်းများအသုံးချ, ပိုဆိကြည်ဂလင်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အမြားအပွားကိစ္စများတွင်တစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်းအကြံပြုသည် - sebum ထုတ်လုပ်မှုလျော့ကျစေပါတယ်ရသောတက်ကြွအာဟာရနှင့်ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့အဆီပြန်အသားအရေ,
သင့်လျော်သောစောင့်ရှောက်မှုကုသမှုမပါဘဲတစ်ခုသာရေတိုရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သင်က overdo နှင့်အရေပြားကုသဝန်မနိုင်,
အဆီပြန်အသားအရေမျက်နှာရိုးရာကုစားသို့မဟုတ်အရည်အသွေးမြင့်အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်ဂရုမစိုက်, များစွာသောပြဿနာများကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်မှန်ထဲမှာရှာနေသာမိမိတို့၏လုပ်အား၏ရလဒ်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဆီပြန်အသားအရေဖောင်ဒေးရှင်းမုန့် - ညာဘက်ကိုရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အကြံပေးချက်များ
Zagarnaya အမှုန့်: နေရောင် Kiss
Lipobeyz မုန့် - အမျိုးမျိုးသောအသားအရေပြဿနာများ၏ထိရောက်သောဖယ်ရှားရေး
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဂျင်း sleeveless ဂျာကင်အင်္ကျီ
Capricorn အမျိုးသမီးတစ်ဦး - ကဘာလဲ?
အလွှာကိတ်မုန့် - စာရွက်
မည်သို့ပါးလွှာ Nastya Kamensky?
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းယခုဘဝနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကို 40 ZLYKA တိရိစ္ဆာန်များ
Meatless အစားအစာများ - အသီးအသီးနေ့အဘို့မူရင်းချက်ပြုတ်နည်းများရယူထားသော
Kurt Cobain နှင့် Courtney မတ်ေတာသညျ
အေးစက်နေတဲ့သီး၏ Morse က
အလင်းကိုအစိမ်းရောင် Nike က Sneaker
သူတို့ရဲ့ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွအတွက် 16 နာမည်ကြီးတွေ - အသစ်တစ်ခုဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ်!